Xildhibaan katirsan baarlamaanka Galmudug oo ka walaacsan in Natiijo la’aan ku soo dhamaado Shirka Garowe – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan Golaha Wakiilada ee maamulka Galmudug ayaa walaac ka muujiyay Natiijada ka soo bixi karta Shirka madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul Gobaleedyada uga socda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Xildhibaan C/raxmaan oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in ay jiraan doodo kulul iyo muran u dhaxeeya hogaamiyaasha halkaas ku shirsan walina aysan jirin Isfaham ay gaareen labada dhinac ee shirka u dhaxeeyo.
Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan baarlamaanka Galmuudg ayaa sheegay in tabashooyin badan ay qabaan maamul Gobaleedyada dowladda Soomaaliyana aysan dooneen in ay qanciso maamulada tabashada qaba taasina ay abuuri karto in shirka Natiijo la’aan ku soo dhamaado.
“Aad ayaa uga cabsi qabaa in dhinacyadu Isfahmi waayeen waayo tabashooyin badan oo gar ah ayey qabaan maamulada, madaxda Qarankana ma ogola in meel dhexe la isugu yimaado oo qaab odaynimo ah wax lagu xaliyo” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan baarlamaanka Galmudug.
“Kuma aqaan tanaasul madaxda dowladda, maamul gobaleedyadana waa buuxaan caro iyo xanaaq Aawgeed, waxaan ka cabsi qabaa in fashil ku soo dhamaado Shirka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan C/raxmaan Cali Ciise.
Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa ugu baaqay dhamaan madaxda Maamul Gobaleedyada in ay tanaasul muujiyaan halka dowladda Soomaaliya-na ka dalbaday in ay ka shaqayso sidii Isfaham looga dhax abuuri lahaa madaxda Dowladda iyo kuwa Maamul Gobaleedyada.
“Madaxda maamul gobaleedyada waxaan ugu baaqayaa in ay tanaasul muujiyaan dalka Soomaaliya kama bixi karo muran iyo kala tagid” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Cabraxmaan Cali Ciise oo katirsan baarlamaanka Galmudug.
Qodobada ugu waa wayn ee la isku haayo ayuu ku tilmaamay Kheyraadka, doorashooyinka, amaanka, dhismaha Ciidamada iyo faragelinta dowladda iyo maamul Gobaleedyada kuwaas oo dhamaantood ah qodobo u baahan isu dulqaadasho iyo in si mid ah looga gudbiyo.